Festival-n’ny trozona: nanohana mivantana ny Telma | NewsMada
Festival-n’ny trozona: nanohana mivantana ny Telma
Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoana sy ny zotra ho an’ny mpizahatany, ankehitriny ny hetsika Festival des Baleines any Sainte Marie, fanao isan-taona. Hetsika anehoan’ny Telma ny fanohanany ny fizahantany rahateo ihany koa.
Tapitra, omaly 15 jolay, ny hetsika lehibe Festival-n’ny trozona (baleines) tany Sainte-Marie. Nahafapo ny vokatra, tamin’ity andiany fahatelo ity, satria lasa tafiditra ao anatin’ny zotra sy ny fandaharam-potoan’ny mpizahatany ny fanatrehana ny Festival des baleines any Sainte Marie ary ivon’ny hetsika ny trozona.
Nafana i Sainte nandritra izay telo andro izay. Nisy ny varotra fampirantiana, ny famelabelaran-kevitra, ny hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kolontsaina, toy ny beach soccer, ny “trail baleine”, ny zumba teny amoron-dranomasina, ny fampisehoana karazana nahandro, sns.
Nandray anjara ny mponina
Nandray anjara mivantana koa ny mponina any Sainte Marie, toy ny fifaninanana hatsaran- tarehy sy bika (miss Fesitval des baleines), ny fitondrana lakana ary indrindra ny filaharambe namakivaky ny tanana, ny Festival ara-bakiteny.
Mpiara-miombonantoka mivantana ny hetsika ny Telma. Nomeny tolo-tanana ny mpikarakara sy ny mpizahatany, ny mpandray anjara, sns. Afaka nisitraka ny tambajotra matanjaka HD amin’ny 4G by Telma avokoa ny rehetra, mba nahafahana nifandray tsy tapaka amin’ny olona akaiky na aiza na aiza misy azy.
Endriky ny fanohanany mivantana ny sehatry ny fizahantany izao tohana nataon’ny Telma izao.